विकृतिको निरन्तरता – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १ गते १:५१ मा प्रकाशित
संस्कृतिको समापन र विकृतिको बीजारोपणलाई माओवादीले क्रान्ति र परिवर्तनको छलाङका रूपमा बुझेको देखिन्छ । यही कारण उसले कतिपय ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्वका चाडपर्व, परम्परा र दिवसलाई राष्ट्रको नियमित पात्रोबाट मेटिसकिएको छ । एकल र हिंसात्मक बाटोबाट हिँडेको हुँदा हिजोका उसका क्रियाकलाप त आलोचित भए नै आज सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा समेत सहयात्री कसैसँग पनि सहमति नै नगरी राष्ट्रिय महत्वको कतिपय सवालमा एकल निर्णय गरी पेलेरै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । मुखले सहकार्य, समावेशिता, स्वायत्तता र अग्राधिकारको बेजोड पैरवीकर्ता जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा माओवादी पक्षधरता, स्वेच्छाचारिता, एकाधिकार, स्वच्छन्दता र स्वनिर्णयलाई लागू गराउने रणनीतिक योजनाअनुसार काम गरिरहेको देखिन्छ । यसबाट न उसलाई कुनै राजनीतिक फाइदा भएको छ न त देशले निकास पाइरहेको छ, उल्टै थिति बिग्रिएको छ र दलहरूबीच हदैसम्म अविश्वास र द्वन्द्व बढेको देखिन्छ ।
शान्तिपूर्ण बाटोबाट हिँड्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछि माओवादीसँग दुईवटा मात्र विकल्प थिए । पहिलो, जनसेनाको मिसन पूरा भैसकेको हुँदा आफ्ना सम्पूर्ण जनसेना विघटन गरेर नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण भई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्ने । दोस्रो, सबैको सहमतिमा जनसेनालाई सबै दलको साझा स्वामित्व र शक्तिका रूपमा स्थापित गराउन तत्कालै साझा संयन्त्र बनाएर जिम्मा लगाउने । यी दुईमध्ये जुन बाटोबाट हिँडेको भए पनि दुवैतिर लड्डु मात्र थियो र देशले पनि धेरैअघि निकास पाइसक्थ्यो । तर, उसले यी दुवै कामका लागि अनिच्छा देखायो र हाम्रो युद्ध अझै जारी छ भन्दै दाउपेच र धोकाको राजनीतिबाट अगाडि बढ्यो । समयमा एक गल्तीलाई स्वीकार्न साहस नगरेमा दस बीस सय गल्ती हुँदै जान्छन् । परिणाम त्यस्तै भयो । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान चार वर्षमा पनि बनेन । सहयात्री दलहरूबीचको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो । दलहरूभित्रै गुट उपगुट जन्मिए भने जनतामा निराशा बढायो । क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनसेनाको उत्साह सेलायो । परिवर्तनका लागि लागेका मुलुकभरका लाखौँ युवाको युगै हल्लाउने उत्साहमा पानी खन्याइयो ।
क्रान्तिकारी छलाङको नाममा दौरा–सुरुवाल औपचारिक राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाइयो । पहिलो विकृति भित्र्याउने काम यहीँबाट सुरु भयो । यस्तो पोसाक कहिले, किन, कसरी सुरुआत भयो कसैलाई खासै चासोको विषय पनि थिएन । पुरानो समयमा सबै जातजातिका मानिसले निसङ्कोच लगाउने दौरा–सुरुवाल, टोपी नेपालीको पहिरन थियो र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत राम्रो पहिचान बनाइसकेको थियो । दौरा–सुरुवालसँगै कोट, टोपी लगाएमा नेपाली भनेर संसारले चिन्थ्यो । अहिले सबै जातजातिका महिला–पुरुष सबैले पेन्ट, सर्ट लगाउन थालिसकेका छन् । कुनै औपचारिक सभा, समारोह, दिवस आदिमा मात्र दौरा–सुरुवाल लगाउने गरिएको थियो । यसलाई कायमै राख्दा के फरक पथ्र्याे र ? ‘नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर दुखाउने’ भनेजस्तै किन नचाहिने तमासा गर्नुपरेको हो ? हाम्रो हिमालतिर लगाउने बख्खु, दोचा र तराईमा लगाउने धोती आदि पहिरनलाई पनि राष्ट्रिय पोसाक घोषणा गरिदिँदा पनि के फरक पथ्र्याे ? आखिर दौरा–सुरुवालको विरोध गर्ने हामी सबै नेपाली निसङ्कोच अङ्ग्रेजहरूको पहिरन भए पनि पेन्ट, सर्ट नै लगाएर ठाँटिने गर्छाै र यसबाट हामीलाई कहिल्यै अपमानबोध भएको छैन ।
आधुनिक नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काइयो । २७ पुसमा मनाइँदै आएको एकता दिवस खारेज गरियो । माओवादीका कतिपय नेताबाट एकीकरण जस्तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनालाई साम्राज्यवादी आक्रमण भनी अपव्याख्यासमेत गरियो । मुलुक लामो समयको द्वन्द्वबाट जर्जर र विभाजित भैरहेको समयमा एकता र मेलमिलापको मार्गबाट हिँड्नुपर्नेमा एकता दिवस नमान्नु र आफ्नो देशको एकीकरणलाई साम्राज्यवादी आक्रमण भनी जनसाधारणको दिमागमा उनको यस महान् कार्यप्रति नै घृणा जगाउन खोज्नुले के अर्थ दिन्छ ? जुन देशको परिवर्तन, विकास र समृद्धिका लागि यति ठूलो उतारचढाव भैरहेको छ, त्यसप्रतिको यस्तो खोटो दृष्टिकोणले हामीलाई कुन ठाउँमा पु¥याउला ? यो अर्काे विकृति थियो । त्यस्तै नेपाली सेनामा माओवादी जनसेनाको प्रक्रियाबिना समूहगत प्रवेश र मधेसी जनसमुदायको पनि त्यसरी नै समूहगत प्रवेश गराउन मधेसी मोर्चासँगको लेनदेनको जुन कुरा भयो, यसले नीतिगत अराजकताको लागि नजिर स्थापित गराउँथ्यो । तर, यसलाई नजरअन्दाज गरियो ।
पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित विषयदेखि जनसत्ताले गरेको निर्णयलाई सरकारी मान्यता दिने हुँदै प्रजातन्त्र दिवस नमनाउनेसम्म आइपुग्दा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय उल्ट्याउनु प¥यो । सरकारको शाखलाई यसले ठूलो नोक्सानी पु¥यायो । सधैँ ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै आइरहेकामा यसपटक बिनाकारण मनाइएन । जब विपक्षी र जनताबाट विरोध आउन थाल्यो, तब गल्ती भएको भनी माफी मागियो । स्पष्ट र दूरदृष्टिकोणको यस्तो अभावले नेतृत्वले कुनै पनि बेला मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्ने किसिमको निर्णय नगर्ला भन्न सकिन्न । प्रजातन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक महत्वको दिवससमेत नमान्नु सामान्य गल्ती मात्र नभई यसप्रतिको निष्ठामै शङ्का बढायो । सतीप्रथा, दासप्रथाविरुद्धको ऐतिहासिक निर्णयलाई हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्छाै, त्यतिबेला कति महत्वपूर्ण घटना थिए होलान् यी । यतिबेलाको आवश्यकता र चेतनालाई हेरेर आज त्यो एकदमै कम महत्वको ठानिन सक्छ । तर, ती घटना युगान्तकारी थिए भन्ने बिर्सन हुँदैन र त्यसको यथोचित सम्मान गरिनुपर्छ । ती परिवर्तन त्यस समयको परिवर्तनकारी शक्तिले नै नेतृत्व गरेर सम्भव भएको हो । राणाशासन विरोधी आन्दोलन, सात साल, ०३६ साल, ०४६ साल, ०६२ ६३ सालसम्मका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षको युगीन महत्व छ । प्रत्येक साना ठूला परिवर्तनपछाडि जनताको ठूलो बलिदानी रहेको कुरालाई अहिले हामीले कम महत्वको भनी अवमूल्यन गर्नु इतिहासको विकासक्रमलाई नबुझ्नु हो ।
अहिले राम्रो काम गर्न कुनै पनि दललाई कसैले अवरोध गरेको छैन । तर, आफैँ सत्ताको बागडोर समातेर पनि बराबर धम्कीको भाषा माओवादीले प्रयोग गरिरहेको छ । सत्तामा पुगिसेकपछि सिङ्गो देशको अभिभावकत्व लिनुपर्छ र सबै पक्षलाई चित्त बुझाउने उसको जिम्मेवारी हुन्छ । आफूबाहेक अरू राजनीतिक शक्तिलाई दुस्मन र प्रतिक्रियावादीको बिल्ला लगाइदिने र हामीलाई जनसंविधान बनाउन दिइएन भने हामी विद्रोहमा जान्छौँ, जङ्गल जान्छौँ भनेर घुर्की देखाउनुलाई कसरी परिपक्वता भन्ने ? यस्तो त्रास खडा गरिरहनुलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ? शान्ति र संविधानलाई आफूले हलो अड्काई यसको दोष अरूलाई दिँदैमा जिम्मेवारी कसरी पूरा हुन्छ र ? कमसेकम साझा सहमतिको अधिकतम विन्दुमा सहमति गरेर छिटोभन्दा छिटो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । जिम्मेवार ठाउँमा आइपुगेर पनि थिति नबसाल्ने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने र विद्रोही मानसिकतामै रुमल्लिरहने हो भने राजनीतिको अर्थ विकृति, अन्योल र ध्वंस भन्नेमात्र निस्कन्छ । जुनसुकै समयका पनि राम्रा कुराको संरक्षण गरेर मात्र नयाँनयाँ सकारात्मक परिवर्तन र प्राप्तिका लागि लाग्नाको महत्व र अर्थ हुन्छ । क्रान्ति र परिवर्तनको नाममा पुराना राम्रा कुराको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हातको चरो उडाएर रुखको चरा टिप्न दौडिँदा खाली हात भएजस्तो मात्र हुन्छ । उद्देश्यलाई सहयोग नपुग्ने निरर्थकको दौडधुपले के हात लाग्न सक्ला र ? के थिति, इमानदारी र सहमतिसाथ राष्ट्रको मूल मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दा माओवादी राजनीतिलाई सहयोग पुग्दैन र ?
राजनीतिक दूरदर्शितामा निकासको मार्ग
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लाग्ला ?
पुँजी बजारमा हल्लाको खेती
स्वास्थ्य व्यापारीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिनु कति उपयुक्त ?
राष्ट्रिय धरोहरहरू जोगाउन ठोस कदम चालौँ
एमसिसी संझौता र अबको बाटो
क्रमशः घट्दै कोरोना संक्रमणमुक्त हुने दर
सिताले ल्याइन् तीज गीत ‘हिस्सी परेकी’
बाघको संरक्षणसँगै राष्ट्रको जैविक विविधतामा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड
निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी समावेशी बनाउन सांसदहरुको सुझाव
कोरोनाबाट झापामा पाँच जनाको मृत्यु
‘क्या हो तिम्रो पारा’ सार्वजनिक
नेप्सेमा १५.११ अंकको गिरावट
सात लाख १५ हाजर नगदसहित ११ जना जुवाडे पक्राउ
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाको अश्लील टिकटक बनाउने एकजना पक्राउ
सत्ताभन्दा मुलक, व्यवस्था र संविधान प्रधान
एनआरएनए इजरायलको अध्यक्षमा कास्कीका गणेश गिरी
ऊर्जा मन्त्री भुसालको प्रश्न : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन कति पटक पहल भयो ?